पोखरा १९ मा विकास निर्माणका कामले सक्रियता पाउँदै - Mero HeadlineThe News portal of Pokhara
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकामा नयाँ वडाको रुपमा पछि समावेश गरिएको वडा नं. १९ मा विकास निर्माणका कामले तिव्रता पाएका छन् ।महानगर भित्रै रहेर पनि विकासमा पछाडी परेको वडा नं. १९ को घार्मीमा अहिले पक्की सडक, सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य चौकी र एक घर एक धारा अन्र्तगत खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य तिव्र रुपमा भैरहेका छन् । जनताले पाउनु पर्ने आधारभुत सुविधा पनि नपाउँदा त्यस क्षेत्रका वासिन्दाले वषौ देखि समस्या झेल्दै आइरहेको भएता पनि अव केही महिना भित्रै ति समस्यावाट भने मुक्ति पाउने भएका छन् ।
लामाचौर स्वास्थ्य चौकीको पक्की भवनको निर्माण कार्य पनि तिव्र गतिमा भैरहेको छ। सामान ढुवानी र पानीका कारण केही समय निर्माण कार्य सुस्त भएपनि दुई सातादेखि काम तिव्र रुपमा भैरहेको ईन्जिनियर महेन्द्र वास्तोलाले जानकारी दिनुभयो । भवन निर्माणमा सुस्तता भएको जानकारी पाउने वितिक्कै त्यहाँको अनुगमनमा पुग्नु भएका वडाध्यक्ष शोभामोहन पौडेल वडा सदस्य कृष्ण गौतम र स्थानिय डिल्लीराम पौडेलले ठेकेदार कम्पनीका प्रमुख प्रदीप कंडेल, ईन्जिनियर महेन्द्र वास्तोला, सुपरभाईजर राजु चौधरीसँग निर्माणका विषयमा छलफल गरेका छन् ।
ठेकेदार कम्पनीका प्रमुख प्रदीप कंडेलले भौगोलिक अवस्थाले पनि तिव्र रुपमा काम गर्न केही कठिनाई भएको वताउँदै अव काममा सुस्तता नआउने र पर्याप्त मात्रामा कामदार खटाईएको वताउनुभयो । वडाध्यक्ष शोभामोहन पौडेलले गुणस्तरयुक्त भवन निर्माणमा कुनै कन्जुस्याई नगर्न र सम्झौता वमोजिम समयमै काम सम्पन्न गर्न सुझाव दिनुभयो ।उहाँले छिट्टै सुविधा सम्पन्न भवनवाट त्यस क्षेत्रका वासिन्दाले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्टिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला कार्यान्वयन ईकाइको १ करोड ३० लाख रुपैयाको लागतमा निर्माण भैरहेको २ तले १४ कोठे भवन आगामी असोज मसान्त भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काठमाण्डौंको डा«गन कन्स्ट्रक्सन जे भीले ठेक्का लिएको हो । त्यस्तै टोलीले लिफ्टीङ्ग खानेपानी योजनाको समेत अनुगमन गरेको छ । टोलीले भुमेपुज्नेमा निर्माण भएको २ लाख लिटर क्षमताको मुख्य टंकीको अवलोकन गरेको सचिव डिल्लीराम पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
योजना अन्र्तगत मुख्य र शाखा टंकी निर्माण भैसकेको , अव विद्युत र शाखा धाराको लाईन विस्तारको काम वाँकी रहेको छ । वडाध्यक्ष पौडेल, वडा सदस्य गौतमले अवको केही महिना भित्र वाँकी काम पुरा गरी घार्मीमा एक घर एक धारा पु्याईने वताउनुभयो । वषैदेखि घार्मीवासी खानेपानी सडक र स्वास्थ्य सेवावाट पिडित भएको स्मरण गर्दै उहाँले अव छिट्टै समस्या समाधान हुने स्पष्ट पार्नुभयो । टोलीले गुराँस पधेरामा निर्माणाधिन वहुउद्घेश्य भवनको पनि निरीक्षण गरेको थियो । पछिल्लो समय स्थानिय तहको सक्रियतामै वडाभित्र विकास निर्माणले तिव्रता पाएका छन् ।